Umhlangano womkhiqizo - Chapman Technology Co., Ltd.
Enqubweni yokuthuthukiswa komkhiqizo, ingxenye yomhlangano ingomunye weminyango yethu ebaluleke kakhulu. Kusukela ekuhlolweni komkhiqizo, ukuhlanganiswa komkhiqizo, ukuthunyelwa komkhiqizo osekuqediwe, lezi zindawo zokusebenza, inhlangano ibonakala ibaluleke kakhulu.
Sihlukaniswe imihlangano yokusebenzela emibili yemikhiqizo kagesi neyegesi nemikhiqizo yezokwelapha. Emnyangweni wokuhlangana komkhiqizo kagesi nogesi, sinezinhlelo zokuphepha zokukhipha umlilo nokuvikela umlilo. Emnyangweni womhlangano womkhiqizo wezokwelapha, Sinecebo lokusungula uhlelo lokujikeleza komoya ngo-2021 ukuqinisekisa ukuthi indawo yokusebenzela yomhlangano ihlangabezana ne-ISO: 13485 standard system standard.
Ezinkampanini eziningi, ukuhlangana ngesandla kudla isikhathi futhi kuyabiza. Sinikeza izixazululo ezenziwe ngezifiso kusuka ekuhlanganiseni okulula kuya ekwakhiweni okuyinkimbinkimbi nasemhlanganweni. Sizoletha izingcaphuno ezisheshayo, ukuguqulwa okusheshayo, ukuhlela okuguquguqukayo nemiphumela yekhwalithi.
UMenzi weChapmanizinikele ekukhiqizeni izixazululo eziningi ezandisa amathuba ebhizinisi lakho. Ngokufakwa kwemikhiqizo yangokwezifiso, ukuhlangana komkhiqizo, nokukhishwa komkhiqizo, akukaze kube lula ukwenza amaphupho akho ebhizinisi aphile. Ithimba lethu elinobubele lizibophezele ekwakheni izixazululo zomkhiqizo zoqobo ezimele izinjongo zebhizinisi, zenze umkhiqizo ube lula, futhi zenze lula ukusebenza Futhi ngezinsiza eziseDongguan, singaletha amakhono wethu wokukhiqiza kuzithameli ezinkulu, sinikeze ukwesekwa kochwepheshe okungashintsha ubuso bebhizinisi lakho.
UChapman Makerukuhlanganiswa komkhiqizo nokupakisha kukhulisa okulindelwe yizinkampani ezigcwalisa izinkampani zangaphandle, kwandise umhlaba webhizinisi njengoba sazi. Usebenzisa inhlanganisela elinganiselayo yezandla zochwepheshe, ubuchwepheshe obuvelayo, nezindawo ezikhethekile, imikhiqizo yakho izobuthwa futhi ihlanganiswe ngokucophelela nangokunemba. Futhi ngeqembu labakhi bokudala, ukukhethwa kokunikezwa okubanzi, nokunakwa okubukhali ngemininingwane, uhlu lwakho lwezimpahla luzolungiswa bese lufakwa ngobuciko obungenakulinganiswa nokuphuthuma.